Ugwu Appalachian: Ihe Niile I Kwesịrị Knowmara | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ji isiokwu gbara ọkpụrụkpụ mara ezigbo mma banyere isiokwu geology. Ka anyị kwuo banyere Ugwu Appalachian. Ọ bụ oke ugwu dị oke mkpa dị n’etiti North Carolina na United States. Aha ya na Bekee bụ Ugwu Appalachian na ọ bụ ugwu dị elu na nnukwu ọnụ ọgụgụ ala na geomorphological. O nwere otutu sistemụ nwere elu nwere ihe karịrị mita 1000 karịa oke osimiri.
Chọrọ ịmata ihe niile kachasị mkpa na ihe nzuzo gbasara Ugwu Appalachian? Na post a ị nwere ike ịchọpụta ihe niile. Naanị ị ga-anọgide na-agụ 🙂
2 Ọnọdụ akụ na ụba nke Appalachian
3 Geology, flora na anụmanụ
4 Egosiputara ebe
N’agbanyeghi na elu ya nile di ihe dika otu nari mita n’elu elu oke osimiri, onwere otu elu nke puru n’elu ndi ozo. Ọ bụ maka Ugwu Mitchell ma dị na North Carolina. Ọ dị mita 2037 ma bụrụkwa ebe kachasị elu na North America niile.
Mmalite ya mere na njedebe nke oge Paleozoic n'oge e guzobere Pangea. Pangea abughi ihe mbu kariri nke kachasi elu nke emebere na uwa a ma obu ihe ruru oge elu uwa dum di n'oge ahu. Nke a mara ekele maka usoro iwu ikuku nke kọntinent de Ọnye na -bụ Alfred Wegener?.
Ebe ọ bụ na North America jikọtara Europe na North Africa n'oge ahụ, ugwu ugwu ndị Appalachians so na otu ugwu dị ka ihe ugbu a na Spain a maara ya dị ka las Villuercas na Atlas dị na Morocco.
Ka oge na-aga, kọntinent ndị gbanwere mgbe ọdịda nke Pangea mebiri, ọ gbawara ma si otú a guzobe oke ugwu dị ugbu a. Ọ dị ịtụnanya na na kọntinent atọ dị iche iche ugbu a, enwere ugwu ugwu nwere otu njirimara, ebe ọ malitere mgbe Pangea supercontinent jikọtara ụwa dum.
Ọnọdụ akụ na ụba nke Appalachian
Ugwu a bu ugwu nke oke ihe okike, ya mere, maka aku na uba obodo. Ndị a bụ nnukwu nkwụnye nke anthracite coal na bituminous coal. Themụ amaala nke Pennsylvania na-ahụ maka iwepụta na nrigbu kol. Ugbo a di na odida anyanwu n'etiti Maryland, Ohio, Kentucky na Virginia. Saịtị a niile juputara na icheku kol.
Enwere usoro mmịpụta ọkụ na ọ na-etinye ihe ize ndụ n’elu Ugwu Appalachian. Ma ọ bụ na e nwere usoro nke mkpochapu elu nke ugwu na coal na -emepụta mbibi nke nnukwu ebe na ihe ndị dị mkpa na gburugburu ebe obibi nke ugwu. Ihe usoro a na-eme bụ ikpochapụ elu ugwu ahụ nwere ọdịnaya carbon dị elu iji belata ihe egwu nke igwupụta ala ma melite ọnọdụ ndị ọrụ.
Nchọpụta nke ndị a coal ego weere ọnọdụ na 1859 na ọ bụ mgbe ahụ na ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ malitere na-ere na-abịarute ebe ndị a. Achọpụtakwara mpaghara gas gas na-adịbeghị anya n'oge na-adịbeghị anya, yabụ ụlọ ọrụ mmanụ agbanyewo anya ya na Appalachia.
Eziokwu bụ na ọ bụ ihe nwute na saịtị nwere ụdị oke okike na akụkọ ihe mere eme maka ụwa bụ aka mmadụ mebiri emebi n'ụzọ dị otu a. Ikwesiri iche na ụdị ugwu a nwere akụkụ dị oke mkpa nke ọmụmụ nke Earthwa.
A na-ewere ihe karịrị ugwu 500 bibiri ebibi ebe a na-awa okwute ma na-erigbu kol na oke. Ọrụ ndị a na-eme ka a ghara ịchọpụta ọdịdị ala mbụ. Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mkpọmkpọ ebe nke meworo n’ebe ndị a ahapụla ọtụtụ ihe ndị na-egbu egbu dị ka ion na ọla dị arọ nke kpatara oke mmebi nke anụmanụ dị iche iche na osimiri na ndagwurugwu ugwu.
Geology, flora na anụmanụ
E kewara ugwu Appalachian abụọ: Southern na Northern Appalachians. Na nke ọ bụla, ihu igwe dị iche na usoro mbara igwe dị elu. Na nke mbu, inwe ala di ala enwere otutu mmiri na-asọba n’Oké Osimiri Atlantik ma mepụta ọtụtụ iyi. Ihu igwe na-ahụkarị n'ụsọ oké osimiri na iru mmiri. E nwere okpukpu atọ nke mbuze: ifufe, glacial, na osimiri.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere Northern Appalachians nke anyị nwekwara enwere oke mmiri, ikuku na ikuku, n’agbanyeghi na ihu igwe di iru mmiri ma buru ugwu.
Osimiri ndị a hụrụ n’Ugwu Appalachian nwere njirimara pụrụ iche. Ma ọ bụ na ha na-asọ n'oké ọsọ ma na-emepụta mmiri mmiri mara mma. Ihe kacha mkpa Ha bụ Hudson, Delaware na Potomac. Osimiri ndị a adịchaghị ogologo mana ha nwere oke iyi nke na-eweta nhazi mmiri mmiri. E nwere etiti dị larịị ebe ọtụtụ osimiri na-enye onyinye ma nwekwaa ndagwurugwu miri emi dị ka ọwa mmiri. Anyị na-ahụ Tennessee na Ohio. Osimiri abụọ a bụ onyinye dị mkpa nye osimiri na Mississippi. Na mgbakwunye, mmiri ya nwere nnukwu mma ma nwee ike ịkọ ala niile nke mpaghara ahụ.
N'ihe gbasara osisi anyi nwere osisi dika fir, beech, birch, cypress, cedar, larch, redwood, white and yellow pine, oak, chestnut, ash, maple, elm, poplar, linden, wdg. N'ebe ugwu Appalachian, e nwere ụdị dịgasị iche iche zuru ebe niile na-etolite na hatchery dị ka ha bụ nkịta ọhịa, marten na mink. Ugwu nwere otutu onu ogugu dika elk, reindeer, elk, bear, antelope, lynx, wolf, wdg.
Ọ bụ ezie na Ugwu Appalachian bụ ihe ncheta nkịtị, ha na-apụ apụ maka ụfọdụ ebe zuru oke iji gaa. Nke mbu bu Museumlọ ihe nkiri Appalachian. N’ebe ngosi nka a i gha amuta ihe banyere ngwa agha, ihe eji egwuri egwu, ite ite, wdg. Ihe a na-eme n’oge ahụ.
Mgbe ahụ anyị nwere ebe ndị ọzọ dịka:
Obodo Shaker. Ọ bụ mpaghara nwere hekta 3000 ma nwee ụlọ ngosi ihe nka, hotels iji nọrọ, ebe picnic na ụlọ ahịa.
Onyeka Onwenu. Ndị a bụ usoro ndị calcite mara mma nke etinyela ọdọ mmiri n'ime ọgba.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ugwu Appalachian bụ ihe ịtụnanya sitere n'okike kwesịrị ịhụ. You nwetụla mgbe ị ga-achọ ịga?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ugwu Appalachian